Muri pano: musha / Technology News / famba / Maitiro ekupinda muWhatsApp account yako palaptop/PC
WhatsApp ndeimwe yeanonyanya kukosha uye akakurumbira mameseji mameseji. Kuita kuti zvive nyore kune vashandisi kushandisa iyo app pane zvishandiso zvisiri zvema smartphones, ivo zvakare vane sarudzo yekuishandisa palaptop uye / kana PC kuburikidza neWhatsApp Web. Chaunongoda chete internet yekubatanidza uye wagona kuenda.
Kuti upinde muakaundi yeWhatsApp paWhatsApp Webhu, WhatsApp Desktop, kana Portal palaptop kana PC, unofanirwa kuongorora kodhi yeQR. Tevedza aya matanho ari nyore:
Maitiro ekupinda muWhatsApp kubva palaptop / PC
Vhura WhatsApp pane yako smartphone. Vashandisi veAndroid vanogona kubaya pane "Zvimwe" sarudzo, nepo vashandisi ve iPhone vanogona kubaya paWhatsApp "Zvirongwa"
Zvino tora pa "Link mudziyo" sarudzo. Vashandisi veAroid vachafanira kutevedzera mirairo yepa-screen kana vaine biometric pamidziyo yavo. Vanozokumbirwa kuvhura foni vachishandisa pini. Kune iOS, ivo vanofanirwa kubaya pa "Link mudziyo" ichiteverwa ne "OK". Kana vashandisi vaine iOS 14 uye pamusoro, ivo vanofanirwa kushandisa Bata ID kana Face ID kuvhura.
Zvino sarudza "Ndichengete ndakasaina" paQR skrini kuti ugare wakapinzwa mukati
Vashandisi vanogona ikozvino kuongorora QR kodhi pakombuta kuburikidza neiyo smartphone
Uye ndizvozvo! Vashandisi vanogona ikozvino kuwana zviziviso, kutumira mameseji kana kushandura chimiro kubva kumakombuta avo. Kuti ubude kubva palaptop kana PC, chaunofanirwa kuita kuenda kuWhatsApp Webhu kana padesktop app wobva wadzvanya pane menyu sarudzo (matatu akatwasuka madotsi) akaiswa pamusoro pechat rondedzero uye wozosarudza "Buda". Kuti ubude kubva ku-smartphone, vashandisi veAroid vanofanirwa kuenda kune menyu muapp uye wobva wasarudza midziyo yakabatana, tora pane mudziyo uye sarudza "Buda". iPhone vanoshandisa vanofanira kushanyira WhatsApp "Settings" uye ipapo enda "Yakabatanidzwa Devices" sarudzo inoteverwa nekusarudza mudziyo uye ipapo "Log Out" sarudzo.
The post Maitiro ekupinda muWhatsApp account yako palaptop/PC yakatanga kutanga BGR India.
Teregiramu vs. Signal vs. WhatsApp: Ndeipi yakanakira iwe?
Maitiro ekudzima yako WhatsApp account uye chengeta data rako